900 နှင့် 500 အတိအကျဖြတ်ပါ။
Excetek၊ Jiann Sheng၊ Amstech
Beiqi Molybdenum ဝိုင်ယာ
Qishuangying Molybdenum ဝိုင်ယာ
ဂရိတ်ဝေါ Molybdenum ဝိုင်ယာ
Jiasong Molybdenum ဝိုင်ယာ
DIC-206 ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော WEDM အာရုံစူးစိုက်မှု
DIC-098 ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော WEDM အာရုံစူးစိုက်မှု
DX-1 WEDM အာရုံစူးစိုက်မှု
မြန်ဆန်သော Wire EDM အစိတ်အပိုင်းများ
စစ်ထုတ်မှု 170х56х30 မီလီမီတာ
Filter L=230၊ OD=68мм၊ ID=25мм
Cincinnati milacron i အတွက် VK 100 စစ်ထုတ်မှု 932636Q
WEDM Filter DS-43F (ဘေးဘက်နို့သီးခေါင်း)
Sinker Filter SP-1535Y-33 (Net with)
2022 နွေဦးပွဲတော် အားလပ်ရက် အသိပေးချက်
လေးစားအပ်ပါသော ဖောက်သည်များအားလုံး၊ တရုတ်ရိုးရာနွေဦးပွဲတော်သည် တစ်ဖန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့် ယခုနှစ်နွေဦးပွဲတော်အားလပ်ရက်အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- 1. Production+Engineering+QA- fr...
2021 ခုနှစ် အမျိုးသားနေ့ အားလပ်ရက် သတိပေးချက်
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ၏ (၇၂) နှစ်မြောက် တရုတ်အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများအတွက် 2021 ခုနှစ် အမျိုးသားနေ့အတွက် အောက်ပါ အားလပ်ရက် အစီအစဉ်များကို သတိပြုပါ။အရောင်း &...
2021 ခုနှစ် အလုပ်သမားနေ့ အားလပ်ရက် သတိပေးချက်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားနေ့အခါသမယတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများအတွက် အောက်ပါအားလပ်ရက်အစီအစဉ်များကို သတိပြုပါ။အရောင်းနှင့် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့- မေလ ၁ ရက်မှ မေလ ၅ ရက်အထိ။ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့- မေလ ၁ ရက်မှ မေလ ၃ ရက်အထိ။အကောင်းဆုံးပါပဲ...
2021 ခုနှစ် နွေဦးပွဲတော် အားလပ်ရက် အသိပေးချက်
လေးစားအပ်ပါသော Customers များအားလုံး၊ တရုတ်ရိုးရာနွေဦးပွဲတော်သည် တစ်ဖန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့် ယခုနှစ် နွေဦးပွဲတော်အားလပ်ရက်အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- 1. Production+Engineering+QA...
2020 ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ခရစ်စမတ်နေ့
ခရစ္စမတ်အချိန်သည် တစ်ဖန်ရောက်ရှိလာပြီဟု ထင်ရပြီး နှစ်သစ်ကူးကို ဆောင်ကြဉ်းရန် အချိန်ကျရောက်လာပြန်သည်။Ningbo De-Shin ၏ဝန်ထမ်းအားလုံးကိုယ်စား ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့် သင့်ချစ်ရသူအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာခရစ်စမတ်ဖြစ်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်...
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက သင့်အီးမေးလ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ချန်ထားခဲ့ပါ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်တစ်စောင် ပေးပို့ပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ 12 နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
© Ningbo DeShin Precision Alloy Co. Ltd. မူပိုင်ခွင့် 20082020။မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။